Tonga amin'ny Galaxy Note 9 sy S9 + any Espaniôla ny Android Pie | Androidsis
Samsung dia eo afovoan'ny Fanavaozana OS ho an'ny avo lenta anao. Tamin'ity herinandro ity ihany ny programa ho an'ny Galaxy S8 sy S8 +, ary naka fotoana kely fotsiny ny modely vaovao mba hahazoana Android Pie. Satria amin'ity tranga ity, ny mpampiasa any Espana miaraka amin'ny Galaxy Note 9 na ny Galaxy S9 + dia efa manomboka mahazo ny kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa.
Samy manomboka ny telefaona roa an'ny marika Koreana fanavaozana ny Android Pie any Espana amin'ny fomba ofisialy. Ka raha manana Galaxy Note 9 na Galaxy S9 + ianao dia ho tonga ny fanavaozana na ho tonga ao anatin'ny ora vitsivitsy. Vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa miaraka amin'ireo maodely ireo.
Ho an'ireo mpampiasa Galaxy Note 9, tonga ny fanavaozana miaraka amin'ny lanjan'ny 1.592,26 MB, noho izany dia zava-dehibe ny fananana toerana. Ankoatr'izay, ity fanavaozana ity dia mahatratra ny avo indrindra amin'ny One UI, Fifanarahana nohavaozina an'ny Samsung ary ny patch patch ho an'ny volana Janoary 2019. Ilay farany indrindra hatreto, noho izany.
Raha toa ka manana Galaxy S9 + ianao, ny lanjan'ny fanavaozana dia 1.756,31 MP. Izy io dia miaraka amin'ny UI iray ao anatiny, na dia amin'ity tranga ity aza dia mahagaga ny manana desambra fiarovana, fa tsy Janoary. Tsy fantatsika ny antony hitrangan'izany, fa tsy maintsy milamina amin'izany patch izany ry zareo.
Toy ny mahazatra amin'ireo tranga ireo, Samsung dia nanakodia ny fanavaozana ny Android Pie ho an'ny telefaona amin'ny alàlan'ny OTA. Noho izany, tsy mila manao na inona na inona ny mpampiasa fa miandry fotsiny ny fahazoana ny OTA. Raha toa ka tsy te hiandry ianao dia tokony handeha amin'ny Settings> Fanavaozana ny lozisialy> Hamarino amin'ny tanana. Eo no ahitanao raha efa misy fanavaozana.
Tsy misy isalasalana, fanavaozana lehibe ho an'ireo mpampiasa manana Galaxy Note 9 na Galaxy S9 +. Samsung dia mihaona amin'ny datin'ny fanavaozana, ary ny maodely avo lenta amin'ny marika Koreana dia efa tonga any Espana. Efa nahazo ny fanavaozana ny Android Pie amin'ny findainao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy Note 9 sy Galaxy S9 + dia navaozina amin'ny Android 9 Pie any Espana
Ireo no telefaona Xiaomi izay hanavao ny Android Pie